Tag: sdk | Martech Zone
Akụ azụmaahịa kachasị baa uru bụ mkparịta ụka ya - ma mkparịta ụka nke ime n'etiti ndị ọrụ na ego mpụga na-eweta mkparịta ụka na ndị ahịa. Symbl bụ ngwungwu zuru oke nke API nke na-enyocha mkparịta ụka mmadụ. Ọ na - enye ndị mmepe ikike ịkọwasị mmekọrịta ndị a ma wuo ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche na ọwa ọ bụla - ọ bụrụ olu, vidiyo ma ọ bụ ederede. Ewubere Symbl na teknụzụ Contextual Conversation Intelligence (C2I), na-enyere ndị mmepe aka itinye ngwa ngwa ọgụgụ isi ọfụma na-aga ngwa ngwa.
Nkwukọrịta oge: Gini bụ WebRTC?
Tọzdee, Septemba 5, 2019 Monday, October 5, 2020 Sienna Amelia
Nkwukọrịta oge na-agbanwe etu ụlọ ọrụ si eji ntanetị weebụ ha na-emekọrịta mmekọrịta na atụmanya na ndị ahịa. Gịnị bụ WebRTC? Nkwukọrịta oge na Web (WebRTC) bụ mkpokọta nkwukọrịta nkwukọrịta yana API nke izizi nke Google mepụtara nke na-eme ka olu na vidiyo na-enwe ezigbo oge na njikọ vidiyo na njikọ nke ndị ọgbọ. WebRTC na-enye ndị nchọgharị weebụ ohere ịrịọ ozi oge site na ihe nchọgharị nke ndị ọrụ ndị ọzọ, na-enyere ezigbo ndị ọgbọ aka na ndị otu na nkwukọrịta gụnyere olu, vidiyo, nkata, nnyefe faịlụ, na ihuenyo